တင်ကွတ်ကယူကေစာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာကိုရယူခွင့်ကိုဆန့်ကျင်တယ် ငါက Mac ကပါ
တင်ကွတ်ခ်သည်ယူကေအားသူ၏ encrypted data များကိုရယူခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple, NOTICIAS, အတော်ကြာ
El နိုဝင်ဘာလ2အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများက၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများ၌စာဝှက်ခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည် ယူကေမှာအတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါကကြီးမားတဲ့အတွက်အလင်းဆီသို့ရောက်လာ။ , အဖြစ် လုံခြုံရေးဥပဒေကြမ်း.
ငွေတောင်းခံလွှာပေးပါ, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမူကြမ်းသို့ထည့်သွင်းခဲ့ပေမယ့်ဆောင်းပါးယခုအချိန်တွင်ဗြိတိန်ပါလီမန်ကအတည်ပြုမရသေးပေမယ့်များစွာသောယုံကြည်ကြသည် အတည်ပြုလိမ့်မည်နှင့်၎င်းသည်နိုင်ငံသားများအားသူလျှိုများနှင့်၎င်းတို့အချက်အလက်များကိုအဆင်ပြေသည်ဟုယူဆသည့်အခါတိုင်းမည်သို့ပင်ရှိနေပါစေရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအစိုးရအားတံခါးဖွင့်ပေးသည်။ စာဝှက်ထားတယ်.
အထူးသဖြင့်ဥပဒေကြမ်းအသစ်သည်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများလိုအပ်သည် မြဲမြဲကိုင်ထားသည် အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ဒေတာနှင့်ဝက်ဘ်အသွားအလာဒေတာရန် အများဆုံးတစ်နှစ်အများဆုံး၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများလည်းဖြစ်လိမ့်မည် "တရားဝင်တာဝန်" လိုအပ်သည့်အနေဖြင့်စက်ပစ္စည်းအား ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်အာဏာပိုင်များကိုကူညီပါ။
၎င်းသည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Apple ကိုယ်တိုင်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်သင်၏စက်ကိရိယာများမှမျက်စိကိုပိတ်ဆို့ရန် encryption ကိုသုံးသည်။ အဲဒီထဲမှာ Apple လည်းပါတယ် သငျသညျကိရိယာတစ်ခုသော့ဖွင့်ဖို့နည်းလမ်းမရှိကြပါဘူး တစ် ဦး ကပိတ်ဆို့ခဲ့သည် access code သို့မဟုတ်သူအားဖြင့် touch ကို ID ကို။ အက်ပဲလ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်နေပါတယ်။ သူကအက်ပဲလ်ကိုသီးခြားပစ္စည်းတခုခုမှာအကြောင်းအရာတွေကို ၀ င်ခွင့်ရစေတယ်။ အက်ပဲလ်အားဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်တူသည်.
သူကစကားပြောသည့်အခါတိကွတ် '' Trinity College Dublin ''သူသည်ဗြိတိန်ဥပဒေကြမ်းကိုသူတွန်းလှန်လိမ့်မည်ဟုကျောင်းသားများအားပြောကြားခဲ့သည် စာဝှက်ထားတယ်.
တိကွတ်လည်းတစ် ဦး ထွက်ခွာကပြောသည် အနောက်တံခါး ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တွင်ဆိုလိုသည်မှာ Apple သည်ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
သင်ဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာနောက်ကျောတံခါးကိုထားခဲ့ပါ မင်းကယောက်ျားကောင်းတွေအတွက်ပဲထားခဲ့တာပဲ။ နောက်ကျောတံခါးမရှိလျှင်မည်သူမျှမဝင်ရ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » တင်ကွတ်ခ်သည်ယူကေအားသူ၏ encrypted data များကိုရယူခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်
Blackguards သည် Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချခဲ့သည်